STSI, Kudzidziswa, Kodzero | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: GIBDD, Kudzidziswa, Kodzero
Chikoro chechikoro chekutya chinoshanda kwenguva yakareba sei? photo int
Chitupa chekudzidzira chikoro chekutyaira chinoshanda kwenguva yakareba zvakadii? foto ext nehupenyu http://www.avtoshkolakam.ru/poleznaya-informatsiya/31-skolko-dejstvuet-svidetelstvo-ob-okonchanii-avtoshkoly http://www.zmost.ru/notes/experts/379-svidetelstvo-ob -okonchanii-avtoshkoly-srok-dejstviya Zvinyorwa, chitupa chekupedza chikoro chekutyaira ndicho chakafanana gwaro renyika sechero chipi zvacho nezvekupedza chikoro, asi ...
Iwe unoda simba regweta rokutya motokari here?
Iwe unoda here simba regweta kutyaira mota? Simba regweta kutyaira kwakanzurwa. Kubva munaNovember 24, mutyairi anofanira kunge aine rezinesi, chitupa che ...
kodzero kumudhudhudhu kodzero kumotokari uye tarakita Uyu mubvunzo kana chikumbiro?))) Kodzero dzinodiwa zvikamu Uye kana huwandu hwemudhudhudhu ukapfuura makumi mashanu emamirimita. Kunyangwe maJapan macooter anosvika pamazana zana emamirimita ...
sei uye kupi kuwana reti rekudzidza kutyaira motokari?
sei uye kupi kuwana rezinesi rekudzidzira kutyaira? Kana iwe uchitova nemakore matatu ekutyaira ruzivo uye mota iine chero giya bhokisi, kana iwe uchinzwa chisinga rambidzike shungu yeku ...
Ndeipi chirango chekufambisa motokari imwe nzira kuenda kumusangano?
Ndeipi chirango chekutyaira munzira imwechete kuenda kumusangano? Kana iwe uchikwanisa kuratidza kuti pakanga pasina chidhinha, saka chinokupa kukwirwa, asi kana zvisiri, saka kekutanga uchafanira kufamba kwemwedzi mina, uyezve, ...
Ndechipi chikwangwani chekudzidziswa mune imwe chikoro chekutyaira, kureva kuti, panguva ipi iwe unogona kutora kurudyi?
Chitupa chedzidzo yakadii muchikoro chekutyaira, ndiko kuti, panguva ipi yaunogona kutora rezinesi? Setifiketi yekupedzisa CHIKORO CHOKUDZIMA haina mutemo wekukanganisa. Zvakafanana nediploma pachikoro. Kunge chero munhu ...
Zvinorevei kutenga kodzero dzeboka B?
Zvinodhura zvakadii kutenga kodzero dzechikamu B? Ini ndinotsigira zvese zviri pamusoro. dzidzisa. ugozvitambidza iwe pachako. Mitemo yemumigwagwa yakanyorwa muropa. kuziva mitemo kuchakuchengetedza uri mupenyu. uyezve kuchave nekudada kwekuti iwe pachako wakapasa, nditende, kunzwa kunonakidza. ...
Ungashandura sei kodzero dzekare dzeSoviet kune itsva? Ndinoda kuongororazve here? kodzero dzakapiwa mu1975
Ungachinjanisa sei kodzero dzekare dzeSoviet itsva? Iwe unoda kuongororwa-zvekare? rezinesi rakapihwa muna 1975. Haufanire kudzidza, asi uchafanirwa kupasa bvunzo, asi izvi hazvina maturo, svondo rine bhuku mu ...
Nzira yekunyatso "kukwevera" kumberi vhiri rinotyaira muchando
Maitiro eku "kukwasva" pamberi-vhiri rinotyaira muchando Panofanirwa kuve neakaringana torque pamavhiri ekutyaira, zvikasadaro iwo haazotsvedza uye mota ichaenda kunge sled, zvichiteerana, iko kutapurirana kunofanirwa ...
Gibdd, mabasa ehurumende
Traffic mapurisa, mamiriro ehurumende, zvekuita, iro dambudziko ... pamwe mumwe atobudirira? chitupa chinofanirwa kuve nechisimbiso kubva kuuchi. nzvimbo yawakaongororwa. panofanira kuva ne ...
chii chirango chinoiswa pakutevedza motokari pasina chirongwa B, asi kune chikwata C
iyo faindi inomisikidzwa yekutyaira mota isina chikamu B, asi kune chikamu C Muchidimbu: kubva pa5 kusvika ku15 zviuru zveRubles + nzvimbo yekupaka mota! Chinyorwa 12.7 chikamu 1 cheMutemo Wekutonga weRussian Federation: https: //temuri.ru/ezda-bez-kategorii / ...
maitiro ekuita nenzira kwayo iyo "flyover" chinhu pane iyo autodrome?
maitiro ekuita nenzira kwayo iyo "flyover" chinhu pane iyo autodrome? Ini ndinokuraira iwe kuti utange kuenderera pabvunzo, sekudzidziswa kwandakaitwa nemurairidzi .. Kunyangwe iye pachake achizviita zvakasiyana .. ASI ndezve bvunzo kuti iye ...
Dzorera hovha yekutya yebiwa!
Kudzorera rezinesi rekutyaira rakabiwa! Kudzorera zvakange zvarasika. chakabiwa kana kukuvara VU uye chitupa chekunyoreswa kwemotokari, unofanirwa kubata MREO OGIBDD, kwaunonyora kunyorera kuburitswa kweiyo nyowani VU uye ...
Ndeapi rudzi rwechiremba vanoda kuenda kundowana uchi. reisensi yekutyaira?
Ndeapi madhokotera aunoda kupfuura kuti uwane huchi? zvitupa zvekutyaira? Tine komisheni chaipo kumapurisa emumigwagwa ... kune chiremba wezveuropathology ... ophthalmologist ... uye ndizvozvo ... maminetsi gumi nemashanu ... chitupa pamaoko echiratidziro chepfungwa ...
pavanopinda mumigwagwa yemigwagwa nguva dzose vakamira, pane pane chinangwa chokunyunyutira uye ndingaenda kupi?
mota dzinogara dzakapakwa pamusuwo panzira, pane chikonzero here chekunyunyuta uye ungaendepi? Edza kunyorera, pamwe vangaturika chikwangwani kana kutumira posvo, kana uchizvipembedza zvinonzwisisika, uye faindi kubva ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pechikamu chetarakita "D" neA3? Ndezvipi zvinodiwa K-700 D uye Belaz A3?
Ndeupi musiyano uripo pakati pechikamu chetarakita "D" neA3? Ndezvipi zvinodiwa K-700 D uye Belaz A3? Sezvineiwo nenyaya yekuti D inobvumidza iwe kutyaira munzira. Enda kune yakasarudzika forum pa ...
Mushure mekupi kwei nguva iyo mitengo ye State Traffic Safety Inspectorate inogona kubviswa nokuda kwekusabhadhara?
Zvinotora nguva yakareba sei kudzima faindi dzemumigwagwa nekuda kwekusabhadhara? mushure megore rimwe, kana mapurisa emigwagwa asina kuedza kukuwana, kana kuyedza kwakadai kwakaitwawo nemapurisa emigwagwa ...
Zvinodhura zvakadii kutenga iyo bvunzo yeguta kumapurisa emigwagwa?
Zvinodhura zvakadii kutenga iyo bvunzo yeguta kumapurisa emigwagwa? Slip iyo kwemakore mashoma. Makore maviri apfuura, vakabhadhara zviuru gumi nezvishanu zveRuble kwekutakura-kusununguka kwekutakura. Sezvo dhora rekutsinhana chiyero hachina kuchinja zvakanyanya, saka mitengo ...
Ndezvipi zvinyorwa zvaunoda kuva nazvo apo iwe unyoresa kuchikoro chekutyaira. izvo zvipi?
magwaro api aunofanirwa kuve nawo kana uchipinda chikoro chekutyaira. rudzii? Kutyaira chikoro? Hapana. ... Uchauya nepasipoti yako, ivo vachakuudza zvese ... mari nepasipoti Pasipoti, chitupa chekurapa uye chipupuriro kubva kuna ambuya, ...
Chii chaunofanira kuita mushure mokupedza kuongorora mumapurisa emigwagwa, mushure mokuwana kodzero? Russia, Moscow
Zvekuita mushure mekupasa bvunzo kumapurisa emigwagwa, mushure mekuwana rezinesi? Russia, Moscow, iwe enda kunzvimbo yawakatambidza nhasi, iwe enda kumusoro kune chero munhu hwindo uye utaure, batsira zvakadaro nezvakadaro, zvichingodaro ...
Mibvunzo ye101 mu database yakagadzirwa mu 0,528 masekondi.